Ra’isilwasaaraha Itoobiya oo Sheegay in ay Doorbidayaan in Xasan Sheekh uu Soo Laabto – Puntland Voice
Ra’isilwasaaraha Itoobiya oo Sheegay in ay Doorbidayaan in Xasan Sheekh uu Soo Laabto
February 4, 2017 11:30 am Views: 21
Ra’isul-wasaaraha Ethiopia, Hailemariam Desalegn, ayaa wareysi uu siiyey Universal TV kaga hadlay xaaladaha dalka Somaliya, sida Doorashooyinka, dibu-u-kabshada dalka, ciidamadooda ku sugan Somaliya iyo faragelintooda dalka.
Waxa uu sheegay in xukuumaddiisa ay saaxib dhow la tahay Madaxweynaha talada haya oo mar labaad xafiiska u tartmaya ee Xasan Sheekh.
Waxa uu bogaadiyay wax-qabadka dowladda Xasan Sheekh Maxamud ee afartii sano ee la soo dhaafay iyo Hoggaanka maamul-goboleedyada Somaliya.
Ra’iisul wasaaraha Ethiopia, Hailemariam Desalegn,ayaa hoosta ka xarriiqay in hoggaanka federaalka iyo dowlad-goboleedyada Somaliya dadkooda ku hageen hab taageeraya.
“Waxay ila tahay oo aan ku amaanayaa hoggaanka Somalida,ee haatan, guud ahaan hoggaanka federaalka iyo maamul-goboleedyada, maxaa yeelay waa iyaga kuwa hoggaaminaya hannaanka, waxay ku horkaceen hab gacansiinaya Somalida.”
Ra’isilwasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn, Iyo Xasan Sheekh Maxamuud
Geesta kale, Ra’iisul wasaare Desalin, oo la weydiiyay in hadalkiisa loo qaadan karo inaysan lahayn Murashax gaar ah, ayaa yiri.
“Hagaag, kuwa annaga nala shaqeeya iminka waxaanu nahay saaxiibo isu dhow, haddii arrimahu ku sii socdaan sidaas, waanu doorbidi lahayn, taasi kama dhigna mid naga reebeysa dadka kale, sababtoo ah mid waloo ka mid ah waanu la soo shaqeynay oo xiriir ayaan leenahay. Marka taas laga tagana waxaanu la soo shaqeynay maaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha, waxaa kaloo aan la shaqeyn karnaa madaxweyne iyo ra’iisul wasaare cusub.”
Hadalka Ra’isul wasaaraha Ethiopia, ayaa ku soo aadaya iyadoo Arbacadii aan ka soo gudubnay, oo ay bisha February kow ahayd, ra’iisul wasaaraha xilliga ka dhacay ee Somaliya Cumar Cabdi Rashiid, uu ka digay faragelin uu sheegay in dowladaha dariska ku hayaan doorashada Somaliya.